Kaspersky Virus Removal Tool — MYSTERY ZILLION
December 2008 edited October 2009 in Antivirus & Virus
Virus ၀င်သွားလို ့စိတ်ညစ်နေသူများအတွက်လာပြီ... ကျွန်တော် Kaspersky virus removal tool တခုရလာပါတယ်။ သူကို install လုပ်ပြီးသုံးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကောင်းတဲ့ အချက်ကဘာကိုသွားတွေ ့လဲဆိုတော့ သူ install လုပ်သွားတဲ ့လမ်းကြောင်းက program file အောက်မှာ မဟုတ်ဘဲ.. Desktop ပေါ်မှာ Folder လေးတခုတည်ဆောက်ပြီးတော့ ထည့်သွင်းသွားပါတယ်။ ပြီးလျှင် Virus တန်းစစ် ယုံပါပဲ။ စစ်ပြီးလို ့ပိတ်မယ်ဆိုရင်လည်းသူက တခါတည်း Uninsatll လုပ်မလားလို ့မေးပါတယ်။ အသုံးမပြုလိုတော့ရင် တခါတည်းဖျက်ပလိုက်လို ့ရပါတယ်။ တခြား software တွေနဲ ့မတဲ ့တာလဲမရှိဘူး လေးလံတာလဲမရှိဘူး... ဆိုတော့ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အိုကေလို ့စိုပြေသွားပါတယ်... ၀င်နေတဲ ့virus လဲ ဂိသွားတယ်ဆိုတော့ အစွမ်းထက်တယ်လို ့ဆိုရပါမယ်။ Kaspersky removal tool ကိုလိုချင်ရင်တော့ ဒီကနေ Download လုပ်ပြီးယူလိုက်ပါခင်ဗျာ။ အဲဒီ site မှာ Kaspersky virus removal tool ကို အမြဲတန်း ရက်အလိုက် Update လုပ်ပေးထားတဲ ့အတွက် virus အသစ်အစမ်းတွေကို မမိစရာ..မရှိလောက်အောင်ပင်ကောင်းလှပါသည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။
ဒီ Kaspersky Virus Removal Tool နဲ့ Kaspersky 2009 ဆိုတာတွေနဲ့ဘာကွာလည်းခင်ဗျာ့
ကျွန်တော်က Kaspersky ကိုအခုမှစသုံးကြည့်မလို့ပါ
တောင်းသည့်ဆုနှင့်ပြည့်စေဗျား ... (Cygron)
အဲဒါက Kaspersky Lab ရဲ့ Product လားဗျ။
ရှိနေတဲ့ Virus ကိုသတ်ပေးမယ်ဆိုတာကိုက ကျေးဇူးတင်သင့်နေပါပြီ။
KasperskyВ® Virus Removal Tool is not capable for real-time protection of your computer.
ကိုရဲထက် ပြောတာမှန်ပါတယ်.. ဒီremoval လေးသုံးယုံလောက်နဲ ့တော့ virus ကို auto protect ကာကွယ်မှုမရှိနိုင်ပါဘူး။ သူကလတ်တလောဖြစ်နေသည့် ကိစ္စကို အမြန်ဖြေရှင်းနိုင်အောင်လုပ်ထားတဲ့target tool တခုပါပဲ။ တကယ်ကို Protect successfully ဖြစ်ချင်ရင်တော့ အခြား License version တွေနဲ ့တွဲသုံးပေါ့... ဥပမာ- Kaspersky 2009, symantec endpoint.. etc., သူတို ့မှာကြတော့ antivirus, antispyware,... တွေကို auto protect လုပ်ပေးနိုင်ယုံသာမက network Firewall တွေပါထည့်သွင်းဖန်တီးထားတော့ ပိုပြီးလုံခြုံမှုရှိတာပေါ့ဗျာ... (မှတ်ချက်။ ။ကိုOrbs.7 မေးထားတဲ ့ဟာကိုပါပေါင်း၍ဖြေလိုက်ခြင်း:D:D:Dဟီးးးးး ဒါပေ့ါ တချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပျက်ဆိုတာ..) အမှားပါရင်ခွင့်လွတ်ပါ။ ကျွန်တော်မသိသေးသောအမှားသာဖြစ်ပါသည်။:77::77::77:
virus remover tools က တခြားantivirus software ကြီးတွေကလည်းထုတ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့လို ့kaspersky လို ကောင်းချင်မှကောင်းမှာပါ(နာမည်ကြီးဆိုတော့) ရှဲ့ရှဲ့ပါ တခြားantivirus software ကြီးတွေမနိုင်တဲ့error virus အများစုကိုဒီ.bat ဖိုင်လေးကလည်းနိုင်ပါတယ်
မသုံးခင်သက်သာခိုလိုက်ဦးမယ်နော် သူက တနေ့တခါအပ်တူဒီတ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလားခင်ဗျာ။ဒါဆိုသူ့ကိုသုံးခါနီးမှဒေါင်း၇မှာပေါ့။အဲလိုလားဗျာ။
ုkvp ဆိုဒ်မှာတင်ထားတဲ့ removal တွေစုထားတာလား။သူ့ကိုသုံး၇င် kasper ကိုခိုးသုံးနေတာေ၇ာ စစ်မှာလား။အကိုကသုံးဖူတယ်ဆိုလို့ပါ။ကီးလေးတွေလစ်သွားမှာကြောက်လို့မသုံး၇ဲသေးဘူး။သူက usb ကိုေ၇ာစစ်ပေးနိုင်လားဗျာ။ အဲမေးတာတွေများသွာပြီ :D
ကို Spaceboy ရေ
သူများတွေရမရတော့မသိဘူး ကျနော် ဒေါင်းလို့ မရဘူးဖြစ်နေလို့ ကူညီနိုင်ရင်ကူညီပါဦးနော်:o:o
ကျွန်တော်တော့ ဒေါင်းလို့ရတယ်ဗျ.. ခက်တာ က ဆိုဒ်က 43.1M ဆိုတော့.. သူက Kaspersky7ထက်တောင် ဆိုဒ်က ပိုကြီးနေသေးတယ်နော်....ဆိုဒ်ကြီးတော့..ဒေါင်းရတာတော့ နည်းနည်းခဲယဉ်းပါတယ်....
Kaspersky removal tool ကိုလိုချင်ရင်တော့ ဒီကနေ Download လုပ်ပြီးယူလိုက်ပါခင်ဗျာ။ အဲဒီ site မှာ Kaspersky virus removal tool ကို အမြဲတန်း ရက်အလိုက် Update လုပ်ပေးထားတဲ ့အတွက် virus အသစ်အစမ်းတွေကို မမိစရာ..မရှိလောက်အောင်ပင်ကောင်းလှပါသည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုက်တာ ရသွားပါပြီး 43.1MB ရှိပါတယ်. စမ်းပြီးတော့လည်း run ကြည့်ပြီးပါပြီး. ကျွန်တော့်စက်က ဗိုင်းရပ်မရှိသေးလို့လားတော့မသိဘူး ဘာမှတော့မတွေ့ဘူးဗျ.. အဲစာတမ်းလေးတော့ပြတယ်... Kaspersky r emoval tool is out of date တဲ့.ဗျာ.. ဆွဲတုန်းက လည်း ဒီက ဆွဲတာပါ...
Download The latest version of the tool containing actual virus definitions can be downloaded here.
အ၇င်ကလည်း Kav7တော့ ရှိပြီးသားပါ.. အခုလိုေ၀မျှပေးတဲ့ စပေ့ဘွိုင်းကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်......
ကျေးဇုူးတင်ပါတယ်.......... Download ယူသွားပါတယ်.........
Kaspersky က ဆာဗာမှာ တင်ထားတယ်..........တခြားစက်တွေမှာ Kaspersky Virus Removal Toolကို သုံးရင် အဆင်ပြေနိုင်မလား
waiwainwe wrote: »
ဘယ်လို Anti-virus တင်ထားသည့် စက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ Kaspersky virus removal tool ကို တင်သုံးပြီး စစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ အဲဒီအတွက် တခြား anti-virus software တွေနဲ့ မတဲ့တာ အဆင်မပြေတာတွေ မရှိပါဘူး။ Kasper removal tool က ပုံမှန်သုံးဖို့အတွက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မိမိ၏ စက်တွေက Anti Virus တစ်ခုခု တင်ထားပါလျှက်နဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ဝင်နေတယ်လို့ ထင်မိနေသည့်အခါမျိုး (သို့မဟုတ်) ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ဝင်ရောက်နောက်ရှက်နေတာကို မိမိ၏ Anti-virus software က မသတ်ပေးနိုင်တဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ သူနဲ့ စစ်ချကြည့်ပါ။ အဲဒီ Kasper removal tool က အမြဲတန်း Daily Update ဖြစ်အောင်ပေးနေတာဆိုတော့ လက်ရှိဗိုင်းရပ်စ်ကိုက်လို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့ သူတွေ အတွက်တော့ အသုံးဝင်တယ် သတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။
(မှတ်ချက်- Kasper က မနိုင်တဲ့ မသတ်ပေးနိုင်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးလဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ Kasper မှမဟုတ်ပါဘူး။ တခြား anti-virus တွေလည်း သူတို့မသိ မသတ်နိုင်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေလည်း ရှိကြမှာပါ။) :):)